Silaanyo oo fariin u diray shacabka Somaliland “Lama Xusi Karayo Xuska 18 May!” – Balcad.com Teyteyleey
Silaanyo oo fariin u diray shacabka Somaliland “Lama Xusi Karayo Xuska 18 May!”
Madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo ayaa fariin cusub u diray guud ahaan shacabka Somaliland, isagoona ku dhawaaqay inuu dib u dhigay dabaaldegyada munaasabadaha 18-ka May iyo 26-ka Juun oo ku beegan asaaska Jamhuuriyadda Somaliland iyo markii ay ka go’een Soomaaliya inteeda kale.
“Lama xusi karayo 18ka May, waxaana ku bedelay u gurmashada dadka ay abaaraha saameeyeen” ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland oo ugu baaqay shacabka ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa inay ka qeyb qaataan gurmadkaasi.
Axmed Siilaanyo ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay ololaha samatabixin ee qoysaska abaaruhu saameeyeen loo ururinayo qaaraan lacageed bacdamaa ay fooda nagu soo heyso bisha barakeysan ee Ramadaanka.
Waa markii ugu horeysay oo xukuumadda Somaliland dib u dhigto munaasabadda 18-ka May oo ku beegan markii ay ku dhawaaqeen If you are looking for cost-effective solutions for your Tinidazole purchase, you should check our offers – buy Tinidazole just for 1.16 USD! gooni isku taag, iyadoo abaaraha ka jira gobolada Somaliland dartood horay dib loogu dhigay doorashooyinkii madaxtinimada.
Guddoomiyeyaasha Degmooyinka G/Banaadir oo xilka laga qaadayo
Faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho